အိုဆာကာကနေကျိုတိုမှအိုဆာကာကနေသွားဖို့ကဘယ်လို Kyoto- သလော - Samurai and Ninja in Japan
အိုဆာကာကနေကျိုတိုမှအိုဆာကာကနေသွားဖို့ကဘယ်လို Kyoto- သလော
ကျိုတိုမှအိုဆာကာ မှစ. သွားကြဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ခြင်းမီးရထားနှင့်အခြား transportatin အခြားနည်းလမ်း
ကျိုတိုမှအိုဆာကာကနေသွားကြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား (အိုဆာကာ-ကျိုတို) ၏ကုန်ကျစရိတ်တလမ်းများအတွက်¥ 1420 ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်¥ 2840 အတွက်အသွားအပြန်အဘို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါအိုဆာကာ-ကျိုတိုကျည်ဆန်ရထားစီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15 မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား 6:00 pm တွင်အိုဆာကာကနေထွက်ခွာ။ နောက်ဆုံးကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား 22:30 pm တွင်အိုဆာကာကနေထွက်ခွာ။ တစ်ဦးကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားဝန်ဆောင်မှုတိုင်း 10 မိနစ်ရှိပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်းကြိုတင်ယူထားနိုင်ပေမယ်ကဘူတာရုံမှာလက်မှတ်မဝယ်ဖို့ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
Categoriesဘလော့ Myanmar TagsBuulet ရထား, ကျည်ဆန်ရထား အစာရှောင်ခြင်းရထား, ကျိုတို, ကျိုတိုမှအိုဆာကာ မှစ. ရရှိရန်မည်သို့ဘယ်လောက်ကုန်ကျပါဘူး, ဂျပန်မှအိုဆာကာကနေခရီးသွား, ဂျပန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဂျပန်အတွက်ခရီးသွား, ဘတ်စ်ကား, ရထား, လေယာဉ်ပျံ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အစာရှောင်ရထား, အိုဆာကာ, အိုဆာကာ မှစ. ကျိုတိုမှသွားဖို့ဘယ်လို